ဘယ်ကျော် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ဘယ်ကျော်
Posted by ムラカミ on Dec 7, 2011 in Creative Writing, Politics, Issues | 49 comments
စာရေးခြင်း ကဲ့သို့သော အပြုအမူများတွင် ညာလက်ထက် ဘယ်လက်ကို ဦးစားပေး အသုံးချတတ်ပါသတဲ့။
၀ီကီမှာတွေ့တဲ့ အဖွင့် စာသားလေးပါ။တကယ်တော့ စာရေးခြင်း ဆိုတာထက် ပိုမိုများမြောင်သော လေးနက်သော
ကိစ္စများအတွက်အတွေးပွားစရာလေးတွေပါလာလို့ အောက်ပါစာစု ကို ချရေးဖြစ်လိုက်ပါသည်။ ၀ိုင်းဝန်းဝေဖန် ဆွေးနွေး
ကြစေလိုပါသည်။  ကိန်း ဂဏန်း တွေက ပြောပါတယ် ။ကမ္ဘာ့လူဦးရေ ရဲ့ ၁၀% ..လူ၁၀ယောက်မှာ ၁ယောက်နှုန်း
က ဘယ်ကျော် တွေ ဖြစ်ပါသတဲ့။ကျနော်လည်းတယောက် အပါအ၀င်ပေါ့။ ဆေးပညာ ရှုထောင့်ကနေ အနည်းငယ်
ဆွေးနွေးခွင့် ပြုပါ ခင်ဗျား ။
၁. Handiness (ဘယ်သန် ညာသန် ဆိုတာ)
လူ့ အာရုံကြော အဖွဲ့အစည်းမှာ motor neuron ဆိုတာ ရှိပါတယ်။ sensory neurone ဆိုတာရှိပါတယ်။ sensory ဟာ
အာရုံခံစားမှု အတွက်ဖြစ်ပြီး motor ကတော့ movement အတွက်ပါ။ fine motor skills တွေဖြစ်တဲ့ စာရေးတာ လို
ကိစ္စမျိုးမှာ motor neuron unequal distribution ဖြစ်နေလေတော့ ဘယ်သန် ညာသန် ဆိုတာ ပေါ်ပေါက်လာရတာပါဘဲ။
Ambidexterity ဆိုတဲ့ ဘယ်ရောညာပါ သန်တဲ့ အမျိုးအစားကတော့ အလွန် ရှားပါးပါသတဲ့။ သည်လိုဖြစ်ရတာဟာ
သန္ဓေသားဘ၀ ခန္ဓာကိုယ် တည်ဆောက်မှုဖြစ်စဉ်တွေကတည်းက ဖြစ် ပျက်တယ်လို့ ဖတ်မိပါတယ်။ အချို့သော လေ့လာမှုတွေက
မွေးဖွားစဉ်အချိန်မှာ သန္ဓေသားဟာ oxygen မလုံလောက်မှု ခနကြာ ဖြစ်ပွားခဲ့မယ်ဆိုရင် ဘယ်သန် တယောက်ဖြစ်လာ စေဖို့
အခွင့်အလမ်း များတယ် လို့ ဆိုထားပါတယ်။
၂၀၀၇ခုနှစ်က gene transcript တခုအရ ကတော့ ဘယ်သန်ဖြစ်မှု နဲ့ဆက်စပ်နေတဲ့gene chromosome ကို
ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ ပြောပါတယ်။ medical point of view ဟာသည်ဆောင်းပါးရဲ့ ဦးတည်ချက်မဟုတ်လို့
မပြည့်စံပေမယ့် သည်မျှနဲ့ တော်ခွင့်ပြုပါ။
၂. စကားလုံးများကပြောတဲ့ ဘယ်ကျော်
ရာစုနှစ်ပေါင်းများစွာက ရှေးယခင် ဥရောပမှာ Sinistra ဆိုတဲ့ စကားလုံး ရှိခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဒါဟာ "ဘယ်" ဆိုတဲ့
ပညတ် အတွက်"evil" ဒါမှမဟုတ် "unlucky" ဆိုတဲ့ ၀ိသေသ ကို ထပ်တူပြု ထားတာပါ။  အင်္ဂလိပ်လို
"sinister" လို့ခေါ်တဲ့ စကားလုံးရှိပါသေးသတဲ့လက်တင်စကား sinus ကနေ ဆင်းသက်လာတာဖြစ်ပြီး
အဓိပ္ပါယ်ကတော့ အိပ်ကပ် "pocket" ပါတဲ့ ။ ရောမခေတ် toga ၀တ်ရုံ ဖားဖားကြီးတွေမှာ ဘယ်ဘက်မှာပဲ အိပ်ကပ်
တပ်ဆင် ချုပ်လုပ်လေ့ရှိပါတယ်။ ဒါဆို ညာလက်က ရော?
လက်တင်လိုတော့ dexter လို့ခေါ်ပြီး အင်္ဂလိပ်လို "dexterity" ပါ ။ Skill ဆိုတဲ့ ၀ိသေသ နဲ့ ပါ။ ညာ ကို "right"
ဆိုပြီး ၀ိဂြိလ် ပြုထားလေတော့ မှန်ကန်မှုဖြောင့်မတ်တည်ကြည်မှု တရားမျှတမှု  "correct" , "proper", "authority",
"justice" တွေရဲ့ လက္ခဏာ ရပ်လို့ ပြောပါတယ်။ဘယ်ကျော် အကြောင်း ဆက်သွားပါ့မယ်။ ပြင်သစ်လို တော့ ဘယ် ဆိုတာကို
"gauche" လို့ပြောပြီး အိနြေ္ဒကင်းမဲ့မှု မတည်ငြိမ်မှုစတာတွေ ရဲ့လက္ခဏာပါ။  Portuguese တွေကတော့ မနက်အိပ်ရာထလို့
ညာခြေနဲ့ ထရင် "Good mood"နဲ့ ထတယ် ဆိုပြီးဘယ်ကတော့ "Bad mood" ပေါ့။ အရှေ့တိုင်းကို ကြည့်ပြန်တော့လည်း
ဘယ် ရဲ့ တရုတ်စာလုံး 左 ကတော့ မလျော်ကန်မှု မသင့်တော်မှု ရဲ့ ၀ိသေသ ဖြစ်ပါတယ်။
(အခြား အဓိပ္ပါယ်ကွဲလည်း ရှိပါသေးတယ်) ခြုံကြည့်လိုက်ရင်တော့ မကောင်းတဲ့ အဓိပ္ပါယ် ဘယ် ကို အများစု မကောင်းတဲ့ အဓိပ္ပါယ်
အနေနဲ့ပဲ သုံးကြတာ များပါတယ်။
မျှတအောင် ကောင်းတဲ့ အနေနဲ့ သုံးတဲ့အသုံး အချို့ ကိုလည်း ဖော်ပြလိုက်ရပါတယ်။ 男左女右 ဆိုတဲ့ စာလုံးအရ ပြောရရင်တော့
男左 ယောက်ျား ဟာ အလုပ် လုပ်ဖို့ (စိုက်ပျိုးထွန်ယက် ဖန်တီးပြုလုပ်) ဖြစ်ပြီး 女右 မိန်းမဟာ စားသောက်(ချက်ပြုတ် ကျွေးမွေး
ပြုစု စောင့်ရှောက်) ဖို့ ရယ်လို့ အဓိပ္ပါယ် ရပါတယ်။သည်ထဲမှာ Taoism ရဲ့ Yin & Yang သဘောတရားလည်း
ကိန်းအောင်းနေပါတယ်။Incas တွေကတော့ ဘယ် ဆိုတဲ့ စာလုံးဟာ special spiritual abilities
ရှိတယ် လို့ ယူဆကြပါတယ်။ magic & healing လိုမျိုးပေါ့။
ကမ္ဘာ့လူဦးရေ ရဲ့ ၉၀%ဟာ ညာသန် တွေဖြစ်လေတော့ ပစ္စည်းတွေကို ညာသန်တွေ သုံးတဲ့အမျိုးအစားတွေပဲ အထုတ်များတာ
မဆန်းပါဘူး။ ဘယ်သန်တွေအနေနဲ့ကတော့ ညာလက် အသုံးချမှုအတွက် ကိုယ့်ကိုကိုယ် adapt လုပ်ရင်လုပ် မလုပ်နိုင်ရင်
special order မှာ သည်လိုပဲ ဖြေရှင်းရပါတယ်။ ဒါဟာ အတော်လေး ကသိကအောက် နိုင်တဲ့ကိစ္စဆိုတာ ကိုယ်တိုင် ဘယ်ကျော်
ဖြစ်တဲ့လူတွေသာ အပြည့်အ၀ခံစားသိရှိနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ လက်တဖက်တည်း နဲ့ ကိုင်တွယ် အသုံးချရတဲ့ one-handed
operation တွေစာရေးခြင်း (အပါအ၀င်)မှာ ကမ္ဘာကြီးက တဖက် ကိုယ်က တဖက် ဆိုတဲ့ အနေအထားမျိုးပါ။
ဘယ်ကျော်တွေ ဒုက္ခတွေ့ရတဲ့ပစ္စည်းတွေ လက်လှမ်းမီသလောက် ချရေးကြည့်ပါဆို ကတ်ကြေး၊ ဓါး နှင့် အခြားသော
အိမ်သုံးပစ္စည်းများ အပါအ၀င် ဂစ်တာ၊ ဂေါက်တံ၊ ဂျင် အစရှိသဖြင့်ပေါ့။
သည်အပိုင်းကတော့ အဓိကထား ဆွေးနွေးလိုသည့် အပိုင်းပင် ဖြစ်ပါသည်။ အချို့သော အနေအထားများတွင် အုပ်စုဖွဲ့
အနိုင်ကျင့်မှုများ ချိုးနှိမ် နှိပ်ကွပ်မှုများ ပင် ဖြစ်ပေါ်လေ့ရှိပါသည်။ လူ့ သဘော လူ့မနော ကိုက(ယေဘူယျအားဖြင့်)
ကိုယ်နှင့် မတူသူ အားနည်းသူ(၀ါ) လူနည်းစု ကို နှိမ့်ချ ဆက်ဆံချင်သည့် သဘောဖြစ်သည်။ ကလေးဘ၀တွင်ပင်
စိတ်ဒဏ်ရာ အကြီးအကျယ်ရသော ဘယ်ကျော်များ ရှိခဲ့မည် မလွဲ။ အရုတ်ထောင် ကျောက်ဒိုးပစ် ကလေး ကစား ၀ိုင်း
တွင်ပင် "ဘယ်ကျော် -င် နှိုက် နတ်မကြိုက်" ဟု အုပ်ဖွဲ့ သီကြွေး လှောင်ပြောင် သောမြင်ကွင်းကို စာရေးသူကိုယ်တိုင်ပင်
တသက် မေ့မရဖြစ်ဖူးပါသည်။ ဘယ်ကျော်တွေ မှာ ဘာအပြစ် ရှိပါသနည်း ။
ဆြာမ မနောဖြူလေး ၏ မှန်ကန်စွာ ရွေးချယ်ခြင်း တွင် ရေးထားသကဲ့သို့ပင်။ ဘယ်သန် ညာသန်ဟူသည် ရွေးချယ်ခွင့် မရှိသည့်
အရာတခုပင် မဟုတ်ပါလော။နိုင်ငံတကာမှ ဘယ်သန် ညာသန် ခွဲခြား ဆက်ဆံမှုများ အကြောင်း မရေးလိုတော့ပါ။
ကိုယ်တွေ့နှင့် အခြား လက်လှမ်းမီသမျှပင် ဆွေးနွေးပါတော့မည်။ ကလေးငယ်များ၏ ကျောင်း စာသင်ခုံတန်းလျားများ အကြောင်းမှ
စတင်ပါမည်။ ညာသန်များအတွက်ဘယ်ကျော် ကျောင်းသားတယာက် နှင့် စာအတူရေးရသည်မှာ အလွန် ကသိကအောက်ဖြစ်မှာပါ
စာရေးသည်ဆိုရာဝယ် စာအုပ်ကိုလူနှင့် ၄၅ဒီဂရီလောက် စောင်းပြီး ရေးရတာဖြစ်လို့ orientation မတူသော လူ၂ယောက်ကြားတွင်
space ပုပ်သည် ဟူသော ပြသနာ စတက်ပါသည်။ ကလေးအတွေးကတော့ မင်းနဲ့ထိုင်ရင်ကျပ်တယ် ငါနဲ့ လာမထိုင်နဲ့
ဆိုတာမျိုးပေါ့။ သည်တော့ စာသင်ခန်း ၁ခန်းဝယ် ၁ယောက်တလေ လောက်သာ ပါဝင်နိုင်သော ဘယ်ကျော်လေး မှာ
အလိုလို အပယ်ခံ အစွံ့ခံ ဘ၀ရောက်ရပါသည်။ အတန်းပိုင် ဆရာ၊ ဆရာမများ လိမ်မာပါးနပ်စွာ ဖြေရှင်းပေးနိုင်မှသာ
ထိုအခြေအနေမှ လွတ်မြောက် နိုင်မည်ဟု ထင်ပါသည်။
နောက်တခုက အားကစားပွဲတွေမှာ ဖြစ်သည်။ တစ်ဦးချင်းနှင့်အသင်းလိုက် ကစားရသော ကစားနည်းများတွင် မသိသာသော်လည်း
၂ယောက်တွဲယှဉ်ပြိုင်ရသော အားကစားများတွင်ဘယ်ကျော်များ ပစ်ပယ်ခံရလေ့ ရှိပါသည်။ ထိုအခြေအနေမှလည်း
အစားအသောက် ကိုင်တွယ်သည့်ကိစ္စများတွင်လည်း ရှေးရိုး အယူများကို ပယ်ဖျောက်စေချင်ပါသည်။ မည်သည့်လက်
မဆို သန့်ရှင်းစင်ကြယ်နေပါကအစားအသောက် ဖန်တီးချက်ပြုတ်ရာတွင် သာတူညီမျှ
အခွင့်အရေး ရှိသင့်သည်မဟုတ်ပါလား။ ထမင်းအိုးကို ဘယ်လက်နှင့် ယောက်မကိုင်ကာမွှေမိလို့ ခေါင်းခေါက်ခံရလို့
ညာလက်နှင့်ပြောင်းကိုင်ပါမှ ထမင်းအိုးမှောက်ကျပြီး ဆော်ပလော်တီးခံထိဖူးသောငယ်သူငယ်ချင်းမလေးတစ်ဦး ၏ အဖြစ်ကို
ပြန်ပြောင်း သတိရမိပါသည်။ သူ့မှာ အပြစ်ရှိသည် ဟု စာဖတ်သူရော ယူဆပါသလား?
ညစာစားပွဲများတွင် Cheers လုပ်ကြသည့်အခါ ယဉ်ကျေးမှု ဓလေ့ ထုံးတမ်းစဉ်လာ စသည်တို့ကို ခနလေး
မေ့ဖျောက်ထားပြီးလူသားချင်း သာတူညီမျှမှု ကို ဖော်ဆောင်မည် ဆိုလျင်ဖြင့် ဘယ်ကျော် တစ်ယောက်
ကို ဘယ်လက်ဖြင့်ပင် Kampai လုပ်ခွင့်ပေးသင့်ပါသည်။ သူမသန်သည့် ညာလက်ဖြင့် လုပ်ပါမှ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သော
မတော်တဆမှု များကို ရှောင်ရှားရာလည်း ရောက်ပါသည်။
ဒါကတော့ ကြုံလို့ ဆန္ဒပြုတာလေး တစ်ခုသက်သက်ပါ ။ကျနော်တို့ ယောက်ျားသားများ ဆေးလိပ် သောက်တတ်ကြပါသည်။
ကားမောင်းရင်း ဆေးလိပ်ရှိုက်ဖွာ တတ်လေ့လည်းရှိပါသည်။ဂျပန်လုပ် ညာမောင်းကားများသာ တင်သွင်းမှုများသော ကျွန်ုပ်တို့
တိုင်းပြည်ဝယ် ဘယ်ကျော်များ ဘယ်ကျော်အခွင့်အရေးဟုကြွေးကျော်ပြီး ဘယ်လက်ဖြင့် စီးကရက် ရှိုက်ဖွာ၍ကားမောင်းခြင်းသည်
ကားသမား ဘေးမှ passenger seat ထိုင်သူ(အထူးသဖြင့်စီးကရက် မသောက်သူ) အား အလွန် အနှောက်အယှက် ဖြစ်ပါသည်။
ဒါလေးတော့ ဘယ်ကျော်များ ညာလက်ဖြင့် စီးကရက်ခဲတတ်အောင်ကျင့်စေချင်ပါသည်။
(စီးကရက် သောက်ဖို့ တိုက်တွန်းတာမဟုတ်သလို မြှောက်ပေးတာလည်း မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျား ...မြင်တာလေးပြောတာပါ)
၅.ဘယ်ကျော်တို့၏ အားသာမှု(၀ါ) ထင်ရှားကျော်ကြား ဘယ်ကျော်များ
ဘယ်နှင့် ညာ မတူညီသော ဦးနှောက်တည်ဆောက်ပုံအရ ဘယ်ကျော်များသည် ပျမ်းမျှ ညာသန်များထက် EQ ပိုမြင့် သည်
ဆိုသည့် အဆိုမျိုးဖတ်ဖူးပါသည်။ တဖန် ထိုသို့မဟုတ် ဟူသောအဆိုအမိန့်များလည်း ထွက်ဖူးပါသည်။ ကော်ဖီသည်
ကျန်းမာရေးအတွက် ကောင်း၏ ဆိုး၏ ဟူသော အငြင်းအခုန် ကိစ္စမျိုးဖြစ်သဖြင့် မဆွေးနွေးလိုပါ။ အထက်တွင် ဆိုခဲ့သလို
ခွဲခြား ဆက်ဆံခံရသော အချက်များလည်းရှိသလို ဘယ်ကျော် ဖြစ်နေရခြင်း၏ အားသာချက်များလည်း မလွဲမသွေရှိပါသေးသည်။
ဥပမာ တင်းနစ် အားကစားတွင် Rafael Nadal သည် ဘယ်ကျော်ဖြစ်၏။ သူ၏လေ့ကျင့်ယှဉ်ပြိုင်ဘက်များသည် ညာသန်များ
များသောကြောင့် ညာသန်တို့၏ အားနည်းဇုံများ အားသာသော ကစားပေါက်။ အထာ ကို ကျေညက် ကျွမ်းကျင်သည်။
အခြားသော ကမ္ဘာ့အဆင့်ညာသန်ကစားသမားများမှာမူ လက်ရည်တူဘယ်ကျော် တင်းနစ် အကျော်အမော် မရှိသလောက်ရှားပါးသောကြောင့်
Nadal နှင့်ဆုံလျင် သူတို့ မသန်သော side များသို့ Nadal ၏ smash များ ၀င်ရောက်ပြီး လက်မြှောက်ရတာများလေသည်။
table-tennis တွင်လည်း ထိုနည်းတူစွာပင် ဘယ်သန် Pan သမားတယောက်၏ service twist ကို ခုခံရန်မှာ အတော်
Phil Mickelson သည် ကမ္ဘာ့ ထိပ်တန်း ဘယ်ကျော် ဂေါက်သီးသမားဖြစ်သည်။ ဘယ်သန်များအတွက်
သီးသန့် ထုတ်သော ဂေါက်တံများကို အသုံးပြုပါသည်။ ညာသန်ကစားသမားများ prefer မဖြစ်သော လေတိုက်နှုန်း နှင့်
လေတိုက်ခတ်ပုံလမ်းကြောင်းရှိသော နေ့များတွင် သူ၏ drive များက ထူးထူးခြားခြား ကောင်းမွန် တတ်လေသည်။
Diego Maradona နှင့် Leonel Messi တို့၏ ဘယ်ခြေထောက်များသည် မှော်ဝင်လေ၏။ ညာသန်များ မသန်သော
တောင်ပံတို့မှ ထိုးဖောက်တိုက်စစ်ဆင်လေ့ရှိတာ ကမ္ဘာသိဖြစ်သည်။ Cricket အားကစားတွင်လည်း ထိုသို့ အလားတူ
အထူးနာမည်ကျော်သည့် left-handed sports strategy ကတော့ လက်ဝှေ့အားကစားနည်းတွင် ရှိလေသည်။
Southpaw အခင်းအကျင်း ဟု အမည်တွင်လေသည်။(အမည်နာမက ရယ်စရာကောင်းနေတာတော့ အမှန်)
left-handed တိုက်ခိုက်ရေးသမားသည် သူမသန်သည့် ညာခြေ ညာလက်တို့ကို ရှေ့တွင်ထားကာ ခင်းကျင်းသည့်စနစ်ဖြစ်သည်။
Rocky Balboa သည် ဘယ်ကျော် လက်ဝှေ့သမားဖြစ်သည်။ အချို့သော ညာသန် တိုက်ခိုက်ရေးသမားများသင်ပင် Southpaw
Strategy ကိုသုံးကြသည်။ Bruce Lee သည် ထိုထဲမှ တယောက်ဖြစ်၏။
နိုင်ငံရေး အသိုင်းအ၀ိုင်း တွင်လည်း ထင်ရှားကျော်ကြား ဘယ်ကျော်များ မနည်းပေ။ တိုက်ဆိုင်၍ ဆိုရလျင်
အယောက် ၄၀မြောက် အမေရိကန်သမ္မတ Ronald Reagan မှစ လက်ရှိ၄၄ယောက်မြောက် သမ္မတ
Barack Obama အထိ (Junior Bush ၁ဦး မှလွဲ၍) အားလုံး ဘယ်ကျော်တွေချည်း။
အမျိုးသမီး ထဲတွင် ထူးထူးခြားခြား ပြင်သစ်ပြည်၏ ဒဏ္ထာရီဆန်သော Joan of Arc သည် ဘယ်ကျော်ဟုဆိုသည်။
သမိုင်းထဲက အထင်ကရများ ပြပါဆိုလျင်Alexander the Grea, Julius Caesar နှင့်Napoléon Bonaparte
Jimie Hendrix နှင့် Kurt Cobain ကတော့ ဘယ်သန်ဂီတာတွေတီးတဲ့ ဂစ်တာဟီးရိုးတွေဖြစ်သည်။
ဘယ်ကျော် ဖြစ်သော်လည်း ပုံမှန် ညာသန်ဂီတာကိုပင် တီးသူများလည်း ရှိသည်။ပုံမှန် Guitar ဆိုရာဝယ် ဘယ်လက် က
အကွက်နှပ် fingering ဖြစ်ပြီးညာလက်က တီးခတ်ခြင်း picking ပင်ဖြစ်သည်။ ပိုမိုခက်ခဲသော fingering အပိုင်းကို
မိမိ သန်သည့် ဘယ်လက်ဖြင့် ပြုလုပ်ခွင့်ရခြင်းမှာ အားသာချက်ဖြစ်သည်။ ထူးခြားသော ဂီတာသမားမှာ
Unchanged Melody နှင့် Out of Nothing at All သီချင်းတို့၏မူရင်းပိုင်ရှင် Air Supply Band မှ Graham Russell
ဖြစ်သည်။ သူသည် ပုံမှန် ညာသန်ဂီတာ ကို ဘယ်ဘက်သို့ လွယ်ပြီး တီးခြင်းဖြစ်သည်။ထို့ကြောင့် သူ့အတွက် ကြိုးတွေက
အကုန် ဇောက်ထိုးတွေဖြစ်သည်။ သည်တော့ Chord တွေကိုလည်း ဇောက်ထိုးကိုင်ရလေသည်။သာမန် Key-D ၏ လက်ကွက်သည်
သူ့အတွက် Key-G ဆန်ဆန် ကိုင်ရသည်။ stumming တွေအကုန်လည်း ဇောက်ထိုးတွေသာ။ယနေ့ သိပ်မတွင်ကျယ်တော့သော
String Backward တီးခတ်နည်းဟု ခေါ်လေသည်။Reverse guitar ဟုလည်းခေါ်ကြသည်
Bruce Willis, Oprah Winfrey, Tom Cruise နှင့် Nicole Kidman တို့ကတော့ ရုပ်ရှင်ရပ်ဝန်းမှ ဘယ်ကျော်များဖြစ်သည်။
ကမ္ဘာကျော်တဲ့ လူဆိုးလူမိုက် စာရင်းမှာလည်း ဘယ်ကျော်တွေပါသဗျ.အမေရိကားမတော့ John Dillinger နှင့် Billy the kid က
ဘယ်ကျော်စာရင်းပြုစုမှု ကိုတော့ ဤမျှနှင့် တော်သေးပြီ။
၇.ဘယ်ကျော် များနှင့် ကျန်းမာရေး
ဘယ်ကျော် ဖြစ်ရလို့ကောင်းတဲ့အချက် နှင့် အတူ ဆိုးတဲ့အချက် တွေကိုလည်းရှာဖွေ ဖော်ထုတ်ပြပါရစေ။ ဘယ်ကျော်တွေဟာ
Schizophrenia လို့ခေါ်တဲ့  စိတ်ကစဥ့်ကလျားရောဂါရဖို့ညာသန်တွေ ထက် အခွင့်အလမ်း ပိုတယ် လို့ စစ်တမ်းတွေက ပြောပါတယ်.
သည် mental disorder အမျိုးအစား ရဲ့ symptoms တွေကိုတော့  auditory hallucinations, paranoid,
bizarre delusions,  disorganized speech and thinking စသည်ဖြင့် ဖော်ပြကြပါတယ် ....
ဘယ်ကျော် တွေ ရဲ့ ဦးနှောက် ဟာ သူတို့ သန်တဲ့ဦးနှောက်အခြမ်း နဲ့ လုပ်ငန်းဆောင်တာ
လုပ်ဆောင်မှု အပေါ်မူတည်ပြီး သူတို့ မသန်တဲ့အခြမ်း ကြားက functional complexကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်ချေရှိသလို
ငယ်ဘ၀က bullying လုပ်ခံ ထိခဲ့တဲ့ စိတ်ဒဏ်ရာ ရယ် stress ရယ်ကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်ချေ ရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။
၇. ဘယ်ကျော် နှင့် ဖြစ်ရပ်ဆန်း
မြန်မာပြည်မှ မြို့တစ်မြို့တွင်ဖြစ်သည်။ ရွှေသာလျောင်းဘုရား တည်ထားကိုးကွယ် တည်ထားမှုနှင့်ဆက်စပ်သည်။
မြတ်စွာဘုရားတို့မည်သည် ဘယ်သန် အဖြစ် ဖွားမြင်တော်မူ လာရိုးမရှိ။ ညာသန်အဖြစ်သာ ဖွားမြင်တော်
မူခဲ့သည်ချည်းဟု မှတ်သားဖူးသည်။ ထို့ကြောင့် ရွှေသာလျောင်းဘုရား တည်ထားကိုးကွယ်ရာဝယ် ညာလက်တော် ကိုသာ
မှီအုံးသည့် အသွင် တည်ထားကိုးကွယ်ရသည်။
ထိုမြို့ တောင်စောင်းကလေးပေါ်တွင် တည်ထားကိုးကွယ်မည့် ရွှေသာလျောင်းဘုရား မှာမူ
ဆိပ်ကမ်း ဘက်ကို မျက်နှာတော်မူ ၍ ထုလုပ်ရန်မှာ မြို့အကွက်တည်နေပုံအရ မြို့မှာ ဘုရား၏ ခြေတော်ရင်း ဘက်ကျရောက်
မည်ဖြစ်သည်။ မြို့ဘက်ခေါင်းတော်ထား တည်ထားရန်မှာလည်း ဆိပ်ကမ်းကိုကျောပေးပြီး တောင်စောင်းဘက်မျက်နှာတော်မူ
သလိုဖြစ်နေမှာ မို့ အဆင်မပြေလှ။ သို့နှင့် တည်ထားရေး သက်ဆိုင်သူများမှာ ညာလက်တော်အစား ဘယ်လက်တော် ကို
မှီအုံးလေဟန် တည်ထား လိုက်လေသည်။ ခေါင်းတော်မြို့ဘက် ခြမ်း ကမ်းနား မျက်နှာတော်မူ အနေအထားနှင့်ပေါ့။
superstitious လော supra natural လော မဆိုနိုင်ပါ။ တိုက်ဆိုင်မှုလား။ မပြုသင့်သည်ကို ပြုမိ၍ ဆိုင်ရာများက
ဆုံးမတာလားလည်း မပြောတတ်။ အဆိုပါ သက်ဆိုင်သူများအံ့သြစရာ ကောင်းလောက်အောင် ဘေးတွေ့ကြသည်။ မြို့မီးလောင်သည်။
ကြာတော့ကြာခဲ့ပါပြီ။တည်ပြီးသား ဘုရားမဖျက်စကောင်း၍ယနေ့တိုင် ထို ဘယ်လက်တော်အုံးတော်မူ ရွှေသာလျောင်း ရုပ်ပွားတော်
ရှိနေဦးမည်ဟု ယူဆပါသည်။ မြို့လည်း ပုံမှန်အတိုင်း ဆက်လက်စီးဆင်းဆဲသာ။ ဘာသာရေး အယူအဆဆွေးနွေးလိုခြင်းမဟုတ်ဘဲ
ဘယ် ဟူသော စကားလုံးနှင့် ပတ်သတ်သော ဖြစ်ရပ် တခုဟုသာမှတ်ယူပေးကြပါ။ ဤတွင် တော် သေးပြီ။
၈. ဘယ်ကျော် နှင့် politics
အထက်မှာလည်း အကြိမ်ကြိမ်ဆိုခဲ့ပါသည်။ ဘယ်သန်များသည် ၁၀% သာ ရှိပါသည်။ minority group ဖြစ်ပါ၏။ ထိုနည်းတူစွာ
ဖြန့်ကျက်တွေးတောရလျင်ဖြင့် လူမျိုးစု minority groups များ၏ သာတူညီမျှမှု ကို ဖော်ဆောင်ရန် လိုပါသည်။ လွတ်လပ်စွာ ကွဲလွဲ
ပိုင်ခွင့် ကိုလည်း နားလည်ပေးစေလိုပါသည်။ လူတယောက်၏ ခန္ဓာကိုယ်၏ ဘယ်ခြမ်း နှင့် ညာခြမ်း သည်ပင်လျင် မတူညီစွာ ယှဉ်တွဲ
အသက်ရှင်သန် လှုပ်ရှား နိုင်သေးလျင် majority group နှင့် minority group များသည်လည်း .....
တကယ်တော့ ...လွှတ်တော်ထဲမှ ၉၀%သော ကုလားထိုင်ပိုင်ရှင်များ ကို ဖတ်မိစေချင်ပါသည်။
ဤဆောင်းပါးသည်ကား အဖဦး ဂူဂဲလ်နှင့် အမိ ဒေါ်ဝီကီတို့မှ မွေးဖွားသန့်စင်သော သားလှရတနာ "မောင်ဘယ်ကျော် "
ဟု အမည်တွင်စေကြောင်း မြန်မာလို typingရိုက်၍ ကိုယ်တွေ့လေး အနည်းငယ်စွက်ထားသည့် ၀မ်းဆွဲသယ်သဖွယ်လောက်သာ
တာဝန် ယူရေးသားသော ကျွန်ုပ် က အဆိုပြုပါသည်။
လူအချင်းချင်း ခွဲခြားခြင်း ကင်းရှင်းကြပါစေ..
ညကျမှ အေးဆေးဖတ်ပြီး.. အေးဆေးကွန့်မန့်
ထပ်လာပေးမယ်.. နှူးဘာ ဂီ့ဂီ့..ရေ..
နင်ပဲ လိုင်းစုံတယ်… မချီးကျူးပဲ ကိုရင်က မနေနိုင်ပေါင်။
လေးစားတယ်ဆိုတာကို မြန်မာစာလုံးမှာ နှစ်လုံးထဲပေးသွားတာပါလိမ့်။။ (I Respect YOU)
နှစ်လုံးမက မြောက်မြားစွာ ဂီ့ရယ် အိုင်ကျူကို ဒဿစည်စည်က
လေးစားတယ်ထပ်ပြောရင် ပိုများပိုနေမလားဗျာ… ;) ;)
ကိုရင်စည်သူက မောင်ဂီ ကို အကြမ်းဖတ်သွားတယ် ဟုတ်လား။
ဘယ်ကျော် ဆိုပြီး အကြမ်းဖတ်တာလား.. ဒါတော့ မကောင်းဘူးနော်။
ရွာ့ ဘယ်ကျော်ဂိုဏ်း ၀င်မား ဖွားဆူး ??
လာဦးမှာနော. … သည်လောက် မကဘူး ထင်တာပဲ…
ဘယ်ကျော် အဖွဲ့တော့ မ၀င်ဘူး။
ဘယ်သန်နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ရွာထဲမှာ ရွှေအိမ်စည်က ပိုစ်တင်ဖူးတယ်။ အဲဒီထဲမှာ ဘယ်သန်တွေ တော်တော် များများ လူလုံး ထုတ်ကြွားဖူးတယ်။
ဟုတ်ပါ့ ကအင်ဂျီးက MG မှာနာမည်ကြီး ဘယ်ကျော်။ Queen ဆိုတဲ့ Band က Lead Vocalist
-Freddie Mercury ဆိုတဲ့ ၂ဖက်ချွန်ကြီး လို ဟုတ်မဟုတ်တော့သိဘူး။ ကိုရင်စည်သူ မန့် ပုံကြည့်ရတာတော့ သူတို့ ၂ ယောက် ဘာလိုလိုပဲ
ဂျတ်စ် ၀ဏ္ဏာ့ ဆေး “တိန်” အုန်းလီ ….
ပျင်းလိုက်တာ ဂီ ရယ် …. ဂီ အခုဘိုးဘွားရိပ်သာကိုရောက်နေလို့ တို့ကိုမေ့သွားပြီလား ဂီ အခုရောက်နေတဲ့ ဘိုးဘွားရိပ်သာလေးရယ် Nagoya ကရူခင်းပုံလေးတွေရိုက်ပြီး ပို့စ်တင်ပါ လားကွယ် ဂီ ရဲ့ပို့စ်လေးတွေမဖတ်ရတာကြာပြီ ရန်မဖြစ်ရတာလည်းကြာပြီး ပျင်းပအေ ….. ဒီပို့စ်မှာရေးဖြစ်တာက ဂီ သိပ်ကြိုက်အားရခဲ့တဲ့ပို့စ်လေးဆိုတော့ အမှတ်တရ၀င်ရေးလိုက်တာ လွမ်းလိုက်တာဂီရယ် …. သေသောသူကြာရင်မေ့ဆိုပေမယ့် ဒီနေ့အထိမေ့မရခဲ့ပါဘူးကွယ် ….
ဘမျိုး ဘိုးတူ ဘယ်ကျော် ဘဇာဒူးကြီး ဘိုင်ကျ ဘိုင်ကြံ
ဘယ်ကျော်တွေအကြောင်းကို စေ့စေ့စပ်စပ် တင်ပြပေးတာ
ဘယ်ကျော်တွေက လက်ပိုတည့်ကြတာ တွေ့ခဲ့ဘူးတယ်ဗျ။
တော်ရင်လည်း အလွန်တော်ကြတယ်လို့ ထင်မြင်မိပါတယ်ဗျာ။
ဘယ်ကျော်တွေကို အင်္ဂလိပ်လို စောက်ပေါလို့လည်း ခေါ်တယ်နော် .. ဟီးဟီး ။
ဘယ်ကျော် ကို စောက်ပေါ ခေါ်တာ မဟုတ်ပါဘူးဗျာ ….
ညာခြေ ညာလက် ကို ရှေ့ထုတ်ခင်းတဲ့ Stance, Strategy ကိုသာ စောက်ပေါလို့ခေါ်တာပါ
မုဒိတာ တရားပွားများနိုင်ကြပါစေ… ဘယ်ကျော်တော်ကောက်တာအလွန်တော်ဆိုပဲ၊
အင်း အနဲစုဆိုတော့လည်း ပြောစရာဖြစ်နေတာပေါ့……။ ကိုယ်လည်းဘယ်သန်ပဲ…။ ဘယ်နဲ့ အသုံးပြုရာမှာ ဆန့်ကျင်ခံရတာက လှောင်ပြောင်ခံရတာပေါ့လေ…။ ဘီလိယက် ကျူတံကိုင်တဲ့ နေရာ …။ လက်တောက်ခုံ ဇယ်တောက်တဲ့ နေရာ….။စက်ပစ်ကွင်းမှာ သေနတ်ပစ်တဲ့ အခါ …။ လက်ပစ်ဗုံးကို ဘယ်နဲ့ ပစ်မိလို့ ပါးရိုက်ခံရတာ နှစ်ခါ…။ ကောင်းတာကတော့ ဘယ်နဲ့ အစောင်းဆွဲထားတဲ့ လက်မှတ်ကို ဘယ်သူမှ အတုလိုက်ဆွဲလို့ မရဘူး…။ နောက်ကြားဖူးတာ တစ်ခု ရှိသေးတယ်…။ ဟုတ်မဟုတ်တော့ မစမ်းသပ်ရဲလို့ ဒီအတိုင်းထားရတယ်…။ ဘယ်သန်တွေက HIV ဗိုင်းရပ် တွေ့ရင်တောင် ခုခံအားကွယ်နိုင်သတဲ့…။ သဘောက သွေးထဲမှာ ဗိုင်းရပ်ရှိရင်တောင် AIDS ရောဂါ ဖြစ်တဲ့ အဆင့် မရောက်ဖူးတဲ့…။ 1983 လောက်က မိုးဝေ မဂ္ဂဇင်းထဲမှာ တွေ့ဖူးတာလားလို့ပဲ…။ သိပ်တော့မသေချာဘူးနော်…။
အောင်မယ်ငီး အဘနီရဲ့ မစမ်းဖြစ်တာ မှန်၏
အလွန်ကျော်ကြားတဲ့ Queenဆိုတဲ့ Band ကLead Vocalist
-Freddie Mercury ဆိုတဲ့ ၂ဖက်ချွန်ကြီးဟာ 1991 မှာ AIDS
သူက ကမ္ဘာကျော် ဘယ်သန်ကြီးတွေထဲက တယောက် ….
အမေက ဘယ်ကျော်။ ငယ်ငယ်တုန်းက ငါက ဘယ်နဲ့အလုပ်လုပ်တယ်။
အဖေက အတင်းညာဖြစ်အောင်ပုံသွင်းလို့ စာရေးတာ၊ ထမင်းစားတာ၊ အကုန်လုံးညာနဲ့လုပ်တယ်
ဒါပေမယ့် တကယ်အားစိုက်ရမယ်ဆိုရင် ဘယ်နဲ့လုပ်တယ်။
စာကို ဘယ်ရော၊ ညာရောနဲ့ရေးနိုင်တယ်။ ဒါပေမယ့် အခု ဘယ်က စာမရေးတတ်တော့ဘူး။ ညာဘက်နဲ့ တော်တော်ကျင့်သားရသွားပြီ။
ကျနော်လည်း ကိုကြောင်ဝတုတ် နဲ့ အဘနီ ကြုံသလို ကြုံဖူးပါသည်…
အိမ်က သင်ထားလို့ စာရေးလျင် ညာသုံးပါသည်… လက် ကိုင်ပုံမမှန်ပါ. …
များများရေးလျင် လက်ခလည် ဒုတိယအဆစ်တွင် နာကျင်ပါသည် သူဘောပင်ကိုင်တာ
တမျိုးကြီးပဲ ဟု အမြဲ အပြောခံရပါသည် ….လက်ရေးမလှပါ…
ဘယ်လက်နှင့်တော့ ၀ိုက်ဘုတ်များပေါ်တွင်သာ ရေးနိုင်ပါတော့သည်။
ဂေါ်လီရိုက်ရင် ကြက်တောင် ရိုက် ရင် ဘယ်.. လှေလှော်တုန်းကလည်း ဘယ်
စားပွဲတင် တင်းနစ် ကတော့ ဘယ်ပန် ညာရှိတ် ကျင့်ထားဖူးပါသည်…
(အဖေက ဘယ်နှင့် သင်မပေးပါ ညာနှင့် သာသင်ပေးသည်)
ဆရာကတော့ သန်တဲ့လက်ပဲ သုံးရမယ်ဆိုပြီး ဘယ်နှင့် ရိုက်စေပါသည်
အဲ့လို ခွကျခဲ့တာပါ …ထို့ကြောင့်.. အပျော်တမ်း ရိုက်လို့ဖြစ်ရုံလောက်သာ ..တတ်တော့သည်
ကိုကြောင်ဝတုတ် သတိမထားမိတဲ့ intentional အချိန်လေးတွေမှာ ဘယ်လက်ကို သုံးမိသလဲ
ဆိုတာ က အစ်ကို တကယ် ဘာသန်တာလဲ ဆိုတာ သိသာမယ့်အချက်ပါ…
စားပွဲပေါ်က ကော်ဖီခွက်ကို လှမ်းကောက်လိုက်တာမျိုး…
ကြမ်းပေါ်ကျနေတဲ့ စာအိတ်ကို လှမ်းကောက်တာမျိုး …ပေါ့….
(ဘယ်လက်၂ဖက်လုံးနဲ့ မဆို သာတူညီမျှ ဖြစ်နေတဲ့ အနေအထားမျိုးပဲ အကျုံးဝင်တာနော်…)
တယောက်ယောက် ကစောင့်ကြည့်ပေးရင် သိမှာပါဗျာ..
ချစ်ချစ်ကို ပြောပြထားပြီး အကဲခတ်ထားခိုင်းပေါ့..
ထင်တော့ ထင်သား ဒီပိုစ့်တင်ကတည်းက ၀မ်းဆွဲသယ် မောင်ဂီလည်း ဘယ်သန်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့
ကိုယ်ထိမှ ကိုယ်သိတယ် ဆိုသလို ခွဲခြားဆက်ဆံခံရမှု ဆိုတာကို ဖတ်မိတော့ စိတ်တောင် မကောင်းဘူး
ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်း အဲလို ခွဲခြားဆက်ဆံခဲ့ဖူးတယ်။
ဒီပိုစ့်တင်တာ သဂျီးကို တောင်ပံတပ်ပေးသလို ဖြစ်တော့မယ်ထင်တယ်
(အားမငယ်နဲ့ မောင်ဂီ- ရွာ့ဥသျှောင် သဂျီးသည်လည်း ဘယ်သန်ပင်ဖြစ်သတည်း။)
အော သူကြီးလည်း ဘယ်ကျော်ပဲကိုး။
ကျွန်တော့် အထင်မှန်နေပြီဗျို့ သူကြီး။
ဂီဂီ လည်း ဘယ်ကျော်။ သူကြီးလည်း ဘယ်ကျော်။
ဂီဂီ လည်း လိုင်းစုံ ။ သူကြီး လည်း လိုင်းစုံ ။
ဂီဂီ လည်း ………ထက်တယ် ။
သူကြီးလည်း ……… ထက်တယ် ။
ဘယ်ကျော် လူတော် တွေနဲ့ လာတွေ့နေရတာ
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ငယ်ထဲက ပြုပြင်ရင် ပြောင်းလဲနိုင်ပေမယ့် အားသန်ရာ နေလာခဲ့ရင်တော့ ခုချိန်မှာ ပြုပြင်ဖို့ မလွယ်တော့ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဘယ်သန်မှ ညာသန်မှဆိုတဲ့အတွေး မတွေးပဲ ကိုယ်ရဲ့ကြိုးစားမှုနဲ့သာ အောင်မြင်မှုကိုတက်လှမ်းနိုင်အောင် ကြိုးစားစေချင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ညာသန်ထက် ဘယ်သန်က ပိုပြီးစာရေးသားကောင်းတာကိုတော့ မနော မြင်ဖူးပါတယ်ရှင်။
မ မနောရေ …
ဆရာဝန် တွေကလည်း ဒါကို ပြုပြင်ဖို့ အားမပေးဘူးဗျ.. …
ကျနော်လည်း မပြုပြင်သင့်ဘူး ဆိုတာပဲ ယုံကြည်လက်ခံထားတယ်..
ဒါ သဘာဝလေ… ဦးနှောက်အစိတ်အပိုင်း တည်ဆောက်ပုံ အနည်းငယ်ကွာခြားလို့
သည်လို ဖြစ်လာတာ ..ရွေးချယ်လို့လည်း မရဘူး …
ဘယ်ကျော် ဟာ ဘယ်လက်နဲ့ ပဲ စာရေးသင့်တယ်… ဒါမှ သူ့ဆီက အကောင်းဆုံးရမယ်..
ညာနဲ့ ကျင့်ထားရင် မရဘူးမဟုတ်ဘူး ရတယ်… သို့သော် သူ့ဆီက အကောင်းဆုံးထွက်မလာတော့ဘူး…
ဘယ်သန်ဘောလုံးသမား ကို ပယ်နယ်တီ ညာနဲ့ ကန်ခိုင်းသလို ဖြစ်နေတယ်ဗျ ……
ဘယ် ရယ် ညာရယ် လို့ တံဆိပ်ကပ် ဂိုဏ်းခွဲချင်တဲ့ စိတ်ကြောင့်မဟုတ်ဘဲ…
ကျနော်တို့ တနေ့ မိဘ ဖြစ်လာတဲ့ အခါ ဆရာသမား အထက်လူကြီး ဖြစ်လာတဲ့အခါ. …
သည်လို မတူကွဲပြားမှုလေးတွေကို နားလည် ပြီး သာတူညီမျှ ဆက်ဆံရေး တည်ဆောက်နိုင်ဖို့
minority တယောက်ရဲ့ ငယ်ဘ၀ ကို ဖွင့်ပြလိုက်တာပါဗျာ…
ပိုစ့်ကို ဘယ်ကျော်တွေအကြောင်း ဗဟုသုတထက်… သေသပ်လှပတဲ့ အနုပညာ လက်ရာတစ်ခုအဖြစ်ပိုမြင်မိပါတယ်… အင်တာနက်သုံးတဲ့လူတိုင်း google, wiki သုံးနိုင်ပေမယ့်… ကောင်းမွန်တဲ့အရေးအသား.. ထက်မြက်တဲ့အတွေးအခေါ်တွေပေါင်းစည်းပြီး တင်ပြနိုင်မှပဲ ပိုစ့်ကောင်းတစ်ခု ဖြစ်နိုင်မှာပါ… ဒီပို့စ်ကလဲ ဆဂီဖန်တီးတဲ့ အနုပညာတစ်ခုပဲထင်ပါတယ်…. ပြည့်စုံလွန်းတယ်ဗျာ…
ဘယ် သန် ပုံများ ပြောရရင် သြချ လောက်ပါရဲ့..
ငယ်ငယ်က ခဏခဏ ညာလက်ကျိုးလို့ အလုပ်တော်တော် များများ ဘယ်လက်နဲ့ လုပ်တတ်အောင် လေ့ကျင့်ထားတယ်။
ဘစ်ကားစီးလို့ တန်းကိုင်ရင်တောင် ညာသန်လို့ ညာနဲ့ ကိုင်ပေမဲ့ ဘယ်လက်လည်း ကိုင်နိုင်အောင် လေ့ကျင့်ထားတယ်။ ကျောင်းတက်တုန်းကဆိုရင် ဘစ်ကားတွေ စီးရလွန်းလို့ လက်မှာတောင် အသားမာ တက်တယ်။ ကားက တန်းတွေ ကြပ်ကြပ် ဆုပ်ကိုင်ထားရတဲ့ အပြင် ဒိုင်နာလို ကားမျိုးတွေ ဆိုတော့ ရမ်းချင်တဲ့ ဘက်ကို ရမ်းနေတော့ ရပ်နေတဲ့ နေရာမှာ တည်တည် တံ့တံ့ ရပ်နိုင်အောင် တန်းသေချာ ကိုင်ရတယ်။
ကြက်တောင်ရိုက်ရင် ညာလက် ညောင်းရင် ဘယ်လက်နဲ့ ရိုက်တယ်။ ညာသန် သလို ဘယ်လည်း လုပ်နိုင်အောင် သတိတရနဲ့ ကိုယ့်ဟာကို ခိုင်းတယ်။
ဘယ်လက်နဲ့ စာရေးကြည့်တယ် အဆင်တော့ မပြေဘူး အခုထိ ဘယ်လက်နဲ့ စာမရေးတတ်ဘူး။
အခုဆို စာမရေးတာ ကြာတော့ ညာလက်နဲ့ ရေးရင်တောင် လက်ရေးတွေ တွန့်တွန့်နေလို့ စိတ်ညစ်နေတယ်။ စာဆို ကွန်ပြူတာနဲ့ ပဲ ရိုက်ချင်တယ်။
ဟိဟိသူများပြောရင် ရီစရာ ဖြစ်အုန်းမယ်။ မြေပဲစေ့လေး တစေ့ ပါးစပ်ထဲ ထည့်လိုက်ရင် ရှေ့သွားနဲ့ တခြမ်းစီ ဖြစ်အောင် ခွဲလိုက်ပြီး ညာတခြမ်း ဘယ်တခြမ်း ၀ါးတာ..
တဖက်လည်း အလွန်အကျွံ လုပ်မိရင် ပိုးမြန်မြန်စားမှာ စိုးလို့.. ငယ်ငယ်က အချိုတွေ စားလို့ ပိုးစားတာ သွားနာလို့ တဖက်စီ ၀ါးခဲ့ရဖူးတာကြောင့် ကြီးသွားတွေကျတော့ ဘာဝါးဝါး တဖက်နဲ့ တဖက် မျှ အောင် သတိထား ၀ါးတယ်။
တခါတုန်းကပေါ့ အမေက ပြောတယ် အိမ်သော့ ယူမသွားနဲ့ ခြံ ထဲ ပြစ်ထဲ့လိုက်တဲ့..
ညာလက်ထဲမှာ ပစ္စည်းတွေ ကိုင်ထားတော့ ညာလက် မအားဘူး။
ဘယ်လက်နဲ့ တံခါး ဆွဲပိတ်တယ်။ သော့ခတ်တယ်။
အမေက ပစ်မှာသာ ပစ်စမ်းပါ.. ငါ အပေါက်ဝ အထိ လိုက်မယူနိုင်ဘူး နေပူတယ်။ အမေ မဖြစ်ဘူး ထင်တယ်။ ပစ်လိုက်ဟာ.. ဆိုတော့ ကြောက်ကြောက်နဲ့ တည့်တည့် အပေါက်ဝကနေ ပစ်လိုက်တယ်။
ဘယ်လက် နဲ့ ပစ်လိုက်တာ အားအချိန်အဆ ကွက်တိ ဆိုတော့ လားရာ ဦးတည်ဘက်သည် တည့်တည့် မသွားပဲ အပေါ် ထောင်သွားလိုက်တာ ရေတံလျှောက်ထဲ ၀င်သွားတယ်။
အလုပ်ရောက်မှ တယောက် လွတ်ပြီး အိမ်ကို ကျော်ဝင်ခိုင်းပြီး သော့ပြန်နှိုက်ရတဲ့အထိပါပဲ။
နောက်ဆို ဘယ်လက်နဲ့ ဆို မလုပ်နဲ့ ငါပဲ လာယူမယ် ဆိုတာမျိုးပေါ့။
တို့လဲဘယ်ကျော်ဘဲ မွေးရာပါပေါ့ ငယ်ငယ်တုန်းကတော့ဖြင့် ရှက်တာပေါ့ ညာနဲ့စာပြောင်းရေဖို့အကြိမ်ကြိမ် ကြိုးစားခဲ့တယ်လေ ကြီးလာတော့ဂုဏ်တောင်ယူသေး
အန်တီ Aye.kk ရော လူကြီးမိဘ ဘ၀ ရောက်လာတဲ့အခါမှာ ..
ဒါမျိုး အယူအဆ ကို လက်ကိုင်ထားဦးမှာလားဟင်???
စာထဲက ကျနော့်ငယ်သူငယ်ချင်းမလေးလို အိမ်မှုကိစ္စ ၀ိုင်းကူတတ်တဲ့ ဘယ်ကျော်ချွေးမ လေးရတဲ့အခါ …သည်လင်္ကာလေး ရွတ်ဦးမလား
ဒါမှ မဟုတ် ကျနော် ကျပ်မပြည့်တဲ့ကောင်လို သားမက်မျိုး ရတဲ့အခါ …..အလကားနေအလကား ဖူးဖူးမှုတ်ထားမလား……
သည် message လေး လက်ဆောင်ပါခင်ဗျား
(ဥပမာလေးတွေအတွက် စိတ်မဆိုးပါနဲ့နော် …)
ဒီဆောင်းပါးလေး အပိုင်လိုချင်လို့ ကူးသွားပြီနော်။
လိပ်ပြာလေးလို ပျံဝဲပြီး ပိတုန်းလေးလို တုတ်မယ်ဆိုတဲ့ လက်ဝှေ့ကျော် မိုဟာမက်အလီ(ခ)ကပ်စီးယပ်ကလေးကို
ကြမ်းပြင်ပေါ်ပြုတ်ကျသွားအောင် ပထမဆုံး စွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့ဘယ်ကျော်လို့ ဖတ်ရဘူးတယ်။
Cassius Clay ကိုဖင်ထိုင်အောင် ဆော်ထည့်နိုင်တာပေါ့..။
ဒါနဲ့ စကားမစပ် …ညဦးပိုင်းက တားတားကွန်းမန့်ကလေး …
နှစ်ယောက်က( M.E ) ပါ ၊ ကွန်ပျူတာသရဲလေးတွေပါ..။
တားချည်းဘဲ ၄ယောက်တဲ့ ….ဘယ်ကျော်တွေချည်းဘဲတဲ့ …
ပီး …ကွန်ပူတာ သရဲတဲ့ …
သန်ရာသန်ရာပေါ့ ဘယ်သန်ဖြစ်ဖြစ် ညာသန်ဖြစ်ဖြစ် အရေးမကြီးပါဘူး
အသက် ၃ နှစ်ကျော်ရင် စာရေးတာကစပြီးပြင်လို့ရတယ်
ဒါကလည်း မိဘရော ကလေးပါစိတ်ပါလက်ပါပြင်ချင်မှဖြစ်တာ ဆရာတွေလည်းပါတာပေါ့
ဒါပေမယ့် ကလေးအတွက် ခက်ခဲနေမယ် ယုံကြည်မှုမရှိဘူးဆိုရင်တော့
Z ကလေးနဲ့ တော့ ပြိုင် ငြင်းရမှာ အားနာတယ်ကွယ်….
ကလေးတွေနဲ့ ပါတ်သတ်ရင် Z ကလေးက ကိုအင်ဂျီးထက်
နားလည်တယ် လို့ ယူဆ လို့ပါ…(သည်လိုလေးလည်း ပင့်ပေးဦးမှ..)
Lefties တွေကို Right-handed တွေအဖြစ် train မလုပ်သင့်ကြောင်း.
သုတေသန ပြုထားတဲ့ အထောက်အထားတွေ case studies တွေ
ကအင်ဂျီးဆီမှာ ပြည့်ပြည့် စုံစုံ ရှိပါရဲ့ …
(ဟီဟိ …အဲ့လာ Nadal ရဲ့ Smash !!)
နာမည်ကြီးတွေ ဆွဲထုတ်ထားတာ ….ဆောင်းပါးရဲ့ တစိတ်တပိုင်းမျှပါကွယ်
(ဘ၀တူ minority တွေကို စိတ်ဓါတ်မကျအောင် အားပေးတဲ့သဘောပါ)
(ဒါက Messi ရဲ့ Strike !!!)
(ဒါကတော့ Obama ရဲ့ Speech !!!)
ဟုတ်ပါပြီ သားဖွားဆရာရယ် မိုးစက်ကလည်းမငြင်းပါဘူး
ဟုတ်ပါပြီ ဘေးမချော်အောင် ဆိုင်တဲ့နေရာမှာပဲ ရေးပါတော့မယ်ကွယ်…
ပညာရှင်တွေ ငြင်းနေဆဲမို့လို့ ပညာရှင်မဟုတ်တဲ့ ၀မ်းဆွဲဆရာလေးလဲ
ဘေဘီဆစ်တာ နာနီလေးကို မငြင်းတော့ပါဘူးကွယ်. …
ရှင်မွေ့နွန်း မင်းနန္ဒာ ကိစ္စ ကို အစဆွဲထုတ်ပြီး
ဘယ်ကျော်သဂျီးက မတူတဲ့အမြင်နဲ့ ပြောကြည့်မယ်နော လုပ်ရင်တော့
၀မ်းဆွဲဆြာလေးလည်း ဘာမှမတတ်နိုင်ပါကြောင်း ….
အဲဒီလို ယုံတမ်းစကားတွေကို အယုံအကြည်မရှိပါကြောင်း
ငယ်ငယ်တုန်းကတော့ မူကြိုမှာ ညာနဲ့ မရေးလို့တဲ့
အမေနဲ့ ဆရာမလည်း ဘယ်နဲ့ရေးတာကိုလက်ခံလိုက်တယ်
ဒါပေမယ့် ကျောင်းတတ်တဲ့ကာလတစ်လျှောက်လုံး ခုံမှာထိုင်ရင်
ဘယ်သန်တွေက တစ်ယောက်တည်း နေတတ်တာ ပိုများသလားလို့
နောက်ဆုံး စာကြောင်း မရှင်းဝူး…
အပေါင်းအဖော်နဲ့ နေတာထက် တစ်ယောက်ထဲနေခြင်းကို
လူအများစုနဲ့ မနေတတ်ဘူး ဆိုတဲ့ သဘော
(မပေါက်ရင်တော့ ဒီပြန်လာခဲ့ ဆက်ရှင်းပြမယ် :))
တကိုယ်တော် အထန်ကျီး နေတာကို
ကြော်ငြာ ၀င်ပေးမလား လို့ ဇဂေါ်ခါး
တဲ့ ဟာကို ….
:'( မေးမိဒါ နာ့အမှား ….
ကိုအင်ကြီးရဲ့ CZ လေး လကုန်ရင်ရောက်တော့မှာကို
ဟိုကရောက်တာနဲ့ ကိုအင့်ကို ဆုံးမဖို့တဲ့
အဘဂီ့… ကိုရင်လည်း ဘယ်သန်… ဒါပေမဲ့
ညာလည်းသန်တယ်… နှစ်ဖက်လုံးရအောင် သက်သက်ကျင့်ထားတာ..
စာရေးရင် ဘယ်ကော ညာကောရေးတတ်တယ်..
သို့ပေမယ့် အားစိုက်ပြီး ကာယအားထုတ်ရရင်
(မွေးရာပါ ဘယ်သန်ဆိုပေမယ့် နှစ်ဖက်လုံး သုံးနိုင်ရင်
ပိုကောင်းမယ်မြင်တယ်ဗျာ) ပြောမယ့်သာ ပြောတာ..
စည်ခမျာမှာလည်း ဘယ်ဘက်ကစမ်းရ ညာဘက်ကစမ်းရတာနဲ့
အထီးကျန်ပီး မိုးမိနေတာ… ဂီ့အသိမဟုတ်လား.. ကွိကွိ..
တစ်ကျွန်းပြန် ဘယ်သန်ဘစည် :cool: :cool:
ဘယ်သန် ဖစ်တယ်ဆို ဆိုပီးရောပေါ့ …
မိုးမိတယ်က ပါသေး …
တောင်ပင်လယ် တောင်ပိုင်းအရပ်မှာ(ဘိုလို ဘာသာပြန်ခြင်းသည်းခံပါ)
သတင်းသုံးတော့မှသာ မိုးမမိပါစေနဲ့ ဆုတောင်း ..ခိခိ
ကျွန်းမပြန် ဘယ်သန် ဘဂီ
မောင်ဘလှိုင်လည်း ဘယ်သန် တစ်ယောက်ပါ..။
ဘယ်သန်တစ်ယောက်ဖြစ်လို့လည်း စိတ်ထဲဘယ်လိုမှ မနေတာ
ဂီ ဒီပို့စ်လေးတင်ထားတာ တော်တော်တောင်ကြာသွားပြီနော် ဂီညွှန်းလို့အခိုင်ဖတ်လိုက်တယ်… ဘယ်ကျော် သူငယ်ချင်းတွေရှိဘူးပါတယ် စာရေးတဲ့အချိန်မှာ လက်တိုက်မိလို့ အဆင်မပြေဖြစ်ခဲ့ဖူးတယ် ဒါပေမယ့် ဘယ်လို့မှ စိတ်ထဲမဖြစ်ခဲ့ဘူး ဂီကကြော်ငြာတော့ဝင်ထားသား ဘာတဲ့ ဘယ်ကျော်တွေကEQ ပိုမြင့်တယ်တဲ့ အလဲ ကိုယ့်ကိုကိုယ်ပြောနေတာလား ဟိ ဟိ… တစ်ခုတော့ထောက်ခံချင်တယ် စိတ်ကဆင့်ကလျားရောဂါ ဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတာ သေချာတယ် ဂီကသက်သေပေ့ါ (အဲအဆိုကိုအကြွင်းမဲ့ ထောက်ခံပါတယ်..ဖျောင်း..ဖျောင်း..ဖျောင်း) နောက်တစ်ခု ပြောကြည့်မယ်နော် ဂီပြောတဲ့ဘုရားက မြိတ်မြို့ ကလား တို့ကဗဟုသုတနည်းတယ်..သူများတွေမသိစေချင်ရင် တို့ အီးမေးထဲကိုတိုးတိုးလေးပြောပြပေးပါ… တုိ့အကြောင်းလေးပြောချင်တယ် တို့ကဘယ်သန် မေမေကျင့်ပေးလို့သာ စာကိုညာနဲ့ရေးဖြစ်တာတဲ့မေမေကပြောတယ်…. အခုချိန်ထိ စာရေးတာရယ် ကတ်ကြေးညှပ်တာရယ်တို့သာ ညာသန်တာ တစ်ကယ်တန်း အမှတ်မထင်လုပ်တဲ့အလုပ်တွေဆို ဘယ်သန်တယ်..နောက်ထူးဆန်းတာတစ်ခုက ဘယ်နဲ့စာရေးတဲ့လူတွေ တွေ့ရင်ဘယ်လိုသဘောကျမှန်းကိုမသိဘူး….တို့ကဘယ်သန်တွေဆိုသိပ်သဘောကျတယ် (ဟေ့ကောင်လေးဂီ တစ်ခြားမတွေးနဲ့နော်) ထူးဆန်းစွာ ဂီကိုပိုခင်ဖြစ်တယ် (ဘယ်သန်မှန်းမသိခင်တုန်းကတည်းကခင်တာ) ဂစ်တာတီးတာတောင် ဘယ်နဲ့တီးချင်တာ အဆင်မပြေလို့မတီးရဘူး….မတီးတတ်ဘူးနော် သူများသင်ပေးတုန်းက လုပ်မိတာကိုပြောတာ လက်တွေနာတာမခံနိုင်လို့ ဆက်မလုပ်ဖြစ်တော့ဘူး….တော်သေးပီ
ဘယ်ကျော်လေးဂီ (နူးဘာဂိုဏ်းချုပ်)လူတွေအားလုံးနဲ့ ပျော်ရွင်စွာပေါင်းသင်းနေထိုင်နိုင်ပါစေ…. စိတ်ကဆင့်ကလျားလဲမဖြစ်ပဲ အခိုင့်ကိုတစ်သက်လုံးသတိရနေပါစေ…